Global Voices teny Malagasy » “Tsy tokony hijery ny olona tompotany eo amin’ny resaka fampandrosoana ihany izy ireo, tsy tokony hijery anay toy ny tetikasa fotsiny izy ireo.” · Global Voices teny Malagasy » Print
“Tsy tokony hijery ny olona tompotany eo amin'ny resaka fampandrosoana ihany izy ireo, tsy tokony hijery anay toy ny tetikasa fotsiny izy ireo.”
Voadika ny 08 Jona 2018 5:20 GMT 1	 · Mpanoratra Dunen Kaneybia Muelas Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Mpitarika tanora Arthuaco sady sekretera ara-teknika ankehitriny ao amin'ny Vaomiera nasionaly ho an'ny Vehivavy tompotany  i Dunen Kaneybia Muelas. Ny manaraka etoana dia dika an-tsoratry ny lahatsary fanadihadian'i Dunen amin'ny zavontenin'ny voambolana, “comunidades indígenas” (vondrom-piarahamonina tompotany).
Ireo teny manjakazaka amin'ny lahatsoratra 1.668 nivoaka tanelatelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 ary hita nanonona ny “comunidades indígenas” tamin'ny lahatsoratra ao anatin'ny angon-drakitry ny Media Cloud dimy an'ny fampahalalam-baovao miteny Espaniola ao Kolombia. (jere akaiky kokoa ny sary ).Dominant words from 1,668 articles published between January 2017 and April 2018 found mentioning “comunidades indígenas” in articles within five Media Cloud collections of Colombian’s Spanish-language media outlets. (view larger image ).
Tsy miombon-kevitra amin'ireo voambolana izay miseho eto mikasika ireo vondrom-piarahamonina sy vahoaka tompotany aho satria tsapako fa misy fifantohana ara-toekarena ao, satria ampidirin'izy ireo ny voambolana toy ny “tetikasa”, “faritra”, ary “tontolo iainana”.
Heveriko fa mihoatra noho izany ny vondrom-piarahamonina sy ny vahoaka tompotany.
Milaza ny latsaky ny 1% momba ny vondrom-piarahamoniko ity zavonteny ity. Mahatsapa aho fa tsy tokony hijery ny vahoaka tompotany eo amin'ny resaka fampandrosoana fotsiny izy ireo, tsy afaka mahita anay ho tetikasa fotsiny izy ireo.
Mino aho fa mety hisy fiantraikany mampidi-doza amin'ny fitoeranay maharitra amin'ny zaratany ny tsy fahatakarana ireo fanombohan-draharaha azon'ny mponina tompotany atolotra.
Ireto voambolana atolotro heveriko fa misolo-tena anay: “fahasamihafana,” “fizakantena,” “fahendrena,” “fakàn-kevitra mialoha,” “mpiambina,” “neny tany,” “zaratanin-drazambe,” “zo,” “vehivavy tompotany”.
Mandray ity fisantarana andraikitra ity ho zava-dehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny vahoaka tompotany aho satria afaka mandinika indray ny fijerinay ny aterineto isika, noho izy manome taha ambony amin'ny fiarovana.
Voambolana inona avy no tokony voambolana idealy mahasolo tena ny vondrom-piarahamonina tompotany Kolombiana ao amin'ny famoaham-baovao?
Mpiambina an'ineny tany
Izy ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames izay niarahana narafitra tamin'i Mónica Bonilla , izay nanomana sy nanamora ny atrikasa notontosaina tamin'ny 18 mey 2018 tao amin'ny Foiben'ny aterineto sy ny fiarahamonina ao amin'ny Oniversiten'i Del Rosario -ISUR- tao Bogotá, Colombia ary namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany Arhuaco sy Wayuu handray anjara amin'ny asam-pahaiza-mitantara nomerika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/08/120470/
 Vaomiera nasionaly ho an'ny Vehivavy tompotany: https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Mujeres_Ind%C3%ADgenas_de_Colombia
 jere akaiky kokoa ny sary: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/comunidadesindigenasCO.png
 Foiben'ny aterineto sy ny fiarahamonina : http://isur.co/